Blockchain News 24 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
Umbala womfanekiso obuNgwevu Investments ukuqalisa imali ezintlanu ezintsha cryptocurrency ku 2018
umbala womfanekiso obuNgwevu Investments, leyo eyenza kube lula ukuba abatyalimali eziqhelekileyo ukuba babheje Bitcoin, uceba ukunikela single-lwemali mali abane abatsha crypto omnye zisekelwe kuthotho nemali enkcazelo ekuqaleni kuka April.
"Ekupheleni kwekota yokuqala kulo nyaka, siyakuba ezingama iimveliso zotyalo ezisibhozo,"Umbala womfanekiso obuNgwevu Managing Director Michael Sonnenshein wathi kudliwano-ndlebe ngo Vancouver.
Umbala womfanekiso obuNgwevu kaThixo Bitcoin Investment Trust original, kuyo evula phezu-the-counter Emelika, iye inyuke ngaphezu 1,300 ekhulwini kunyaka ophelileyo njengoko abatyali-mali bamaziko uyathintelwa ekuthengeni iingqekembe zedijithali ngqo kunjalo kufuna ukuvuleleka iinzuzo ze cryptocurrencies.
Sonnenshein uthe imali yayiza yakhiwe ibe Bitcoin Investment Trust, enika abatyali zimali ukukwazi ukuba bafumane utyhileko ngeemali digital ngokusebenzisa kuthengwe isibambiso.
Sonnenshein wathi: "Loo isithuthi liza kubamba iimali phezulu ulwelo digital, kuya kuba ikepusi-weighted market, kwaye elungelelanisiweyo qho ngekota. "
Ingabinani New York-ofisini ukuba 'sihlale iindlebe zethu evulekileyo koko abatyali-zimali abafuna utyhileko,"Sonnenshein uthe. "Ukuba kukho iimali ezithile ukuba abatyali-zimali becela kuthi zokuceba iimveliso emhlabeni, ngoko sifuna ukuba kubekho ukwanelisa loo mfuno. "
arhente rating Weiss likhupha nakumahlelo cryptocurrencies – Bitcoin ufumana C +
Weiss Ukulinganiswa, ehamba arhente rating ezimeleyo uhlanga ngayo amaziko zemali, namhlanje ukhupha kuqala-ngonaphakade mabanga hlanga kwi cryptocurrencies liqumrhu rating zemali.
Yintoni eyenza entry Weiss 'ibe amanqaku cryptocurrency ephawulekayo imbali yayo yokuzimela nokuchaneka kwamanye amacandelo zotyalo, njengoko kuphawulwe yi U.S. Government uxanduva Office (Gao), Barron kaThixo, The Wall Street Journal, kwaye I-New York Times, phakathi kwabanye.
Iireyithingi Weiss Cryptocurrency ukuvavanya entengo, umvuzo olunokubakho, technology blockchain, Ukuthathwa, yokhuseleko, kunye nezinye izinto. "Ngenxa kwiinguqu ezikhawulezayo data,"Kuchaza Weiss, "Ukuphuculwa kunye kungakho rhoqo ngaphezu kwamanye amacandelo siya ukugubungela."
Bitcoin (rated C +) ufumana amanqaku amahle ukhuseleko kunye nokwamkelwa kwande. Kodwa ukudibana imiqobo womnatha enkulu, ukulibaziseka ezibangela kunye neendleko eziphezulu iintengiselwano. Nangona imizamo eqhubekayo ukuba ekufezekiseni ethile nempumelelo ekuqaleni, Bitcoin akanayo indlela nangoko ngokukhawuleza kuphuculo ikhowudi yayo software.
Weiss Ukulinganiswa, olwaqala ngo 1971, amazinga 55,000 amaziko kunye notyalo. Ngokungafaniyo Standard & nabangamahlwempu, eguquguqukayo kaThixo, Fitch kunye A.M. best, Weiss akayithathi imbuyekezo naluphina uhlobo amaqumrhu ngayo amazinga.
Umvumbo iphelisa Bitcoin inkxaso
iprosesa Intlawulo umvumbo akusekho lixhasa Bitcoin njenge indlela yokubhatala eqala ngoAprili 2018.
Umvumbo waqala ukwamkela Bitcoin ngo 2014 kodwa ngoku ucaphula imirhumo yorhwebelwano Bitcoin kunye namaxesha yokuqinisekisa olucothayo kakhulu njengoko izizathu zokuyeka ubuhlobo baso Bitcoin.
urhulumente woMzantsi Korean uhlola Exchange cryptocurrency’ yokhuseleko
South Korean ukutshintshiselana Bitcoin zahlolwa nemigangatho zokhuseleko namnye siyahlangabezana, ngokutsho urhulumente woMzantsi Korea. Ngalinye 8 ukutshintshiselana igadwe zabonakala “eyanele” kunye nezindululo kwenziwa ukuphucula ukhuseleko lwabo.
imithetho emitsha uya kwandisa izohlwayo kunye nezikhokelo ixesha elisetelwe yokutshintshiselana ukulungiswa ukuze ihlangabezane neemfuno okanye ubuso ukuvalwa kunokwenzeka.
Oku kubonisa ukuba urhulumente woMzantsi Korean kuthatha ukutshintshiselana cryptocurrency kakhulu yaye uyakuxabisa ukhuseleko.
Digital Currency yoMphicothi Friedman LLP kususa onke ukhankanya of Bitfinex kwi website
Friedman LLP, inkonzo umphicothi currency digital, kususwe nakuphi na ukukhankanywa lwangaphambili Bitfinex njengomxumi, wazisusa nakuphi na ukukhankanywa kwabo ukutya kwabo iindaba.
Oku kuza kuba izikrokro bekhula ngolwalamano phakathi Bitfinex kunye ifoni njengoko USDT (kubudlelwane ifoni) ziya kubalwa yi izigidi kule veki igqithileyo.
Isixeko e Vermont ukuba usebenzise blockchain ukulungiselela iirekhodi registry umhlaba
Isixeko of South Burlington, Vermont, into trialing inkqubo yobhaliso ilizwe esebenzisa blockchain njengenxalenye yenkqubo ekulobeni ubunini.
Office The City UMabhalane wabhengeza ngoMvulo ukuba oko ibambisene blockchain sesiqalo Propy ukugcina data yolawulo irekhodi komhlaba, ngokutsho ukukhululwa press. Injongo ye pilot kukuba ukuphuhlisa ileja kakuhle ngakumbi nangokukhuselekileyo ukuze iintengiselwano real estate kunye nenjongo olongezelelweyo yokuphonononga kakuhle usebenzisa iqonga blockchain-based kuya kunciphisa iindleko yokugcina data yolawulo mhlaba xa kuthelekiswa nenkqubo yemveli.
City Clerk South Burlington kaThixo, Donna Kinville, uthe emzini “kusoloko onomdla ithuba technology eza kuphucula ukunikezelwa kwayo lweenkonzo kubahlali. Sizimisele ukufunda kule pilot Propy.”
bank Nordea siphelisa abasebenzi ukusuka zorhwebo Bitcoin
Nordea, ibhanki yaseYurophu Northern esekelwe kuzo Finland, undixelele yonke yayo 31,500 abasebenzi abanako ukodlula Bitcoin.
Nordea uza kumisela ban yalo Feb. 28, emva kokuba ibhodi wayo wavuma ukuba athathe isigqibo ngenxa yokuba i "uhlobo okungalawulwayo" imarike, uNksz Afroditi Kellberg wathi ngefowuni ku ngoMvulo.
"Kuyinto mkhuba lonke neebhanki lokuthintela i-akhawunti zakho zokujongana kwabasebenzi ukuthintela ukuba ukuthatha izikhundla utyalo-mali ngumyinge, okanye ukuze aboniswe umngcipheko ilahleko yemali kwaye ngoko nefuthe emi-mali zawo,"Kellberg uthe. "Nordea ke, njengazo zonke iibhanki, unelungelo lokuba echazwe imigaqo kule ndawo ezisebenza kubasebenzi bayo. "
Nordea uthe nkqubo walo "iquka izibonelelo otshintsho abasebenzi kunye zorhwebo ezikhoyo kwaye ivumela ngaphandle ezithile." Abaqeshwa kakade Bitcoin ukuba "kuvunyelwe ukugcina iifama ezikhoyo."
Nordea ke ibhanki yaseYurophu ezinkulu kuqala ukunyanzelisa ban onjalo.
Ngokuphathelele ne t ...
Post Previous:Ngubani na uJohn uHyman, okanye yintoni esiyaziyo umcebisi investment yocingo
Post Next:Robotrading okanye Trading manual